VT050 - Mashiinka Tijaabada Dabada ee weelasha - tijaabada ogolaanshaha UN
Isbarbar dhig karto kartoonka qiimaha boorsada
by Injineer Delta / Isniintii, 14 Oktoobar 2019 / Published in Tuur Qalabka Tijaabada
VT050 waa mashiinka tijaabada dhibicda jecel, kaasoo loo qaabeeyey heerarka amniga ee ugu dambeeyay.
Waxaa loogu talagalay tijaabinta durbaannada caagga ah, weelasha, baakadaha, iwm.
VT050 wuxuu ka kooban yahay miis kor u qaadis ah oo ku habboon noocyada wax soo saarka badan (bacaha, sanaadiiqda, dhalooyinka, iwm). Miiska waxaa si otomaatig ah loogu soo qaadi karaa dusha sare ee hoos udhaca waxaana hoos looga furi doonaa si shaygu u dhaco Tan waxaa loogu talagalay si miisku si dhakhso leh ugu furmo duullimaadyada alaabooyinka.
Miiska oo dhan iyo nidaamka dhifashada waxaa difaacaya jir bir ah oo laga furay dhinaca hoose. Albaabka hore ayaa loo diyaariyaa si miiska loo geliyo loogu talagalay rarida, hagaajinta ama howlaha nadiifinta.
▼Tuur Qalabka Tijaabada
►Automatikada injineerinka ee Delta